Ciidanka DANAB oo la wareegay ammaanka guud ee madaxweyne Farmaajo (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka DANAB oo la wareegay ammaanka guud ee madaxweyne Farmaajo (SAWIRO)
Ciidamada DANAB oo ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya ayaa guud ahaan la wareegay ammaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, kuwaas oo la sheegay inay bedeleen ciidamadii AMISOM ee hore u ilaalin jiray ammaanka madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo maalintii shalay ku guuleystay doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa dalbaday in ammaankiisa ay sugaan ciidamada DANAB oo ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Gaashaan oo iyagana ka tirsan ciidanka nabad-sugidda qaranka ee NISA.
Kaalinta ay ciidanka AMISOM ku yeelan doonaan amniga madaxweynaha ayaa noqon doonto oo kaliya inay ammaankiisa dusha kala socdaan, waxayna taasi ka mid tahay talaabadii ugu horeeysay uu madaxweyne Farmaajo qaado.
Madaxweyne Farmaajo ayaa saacadihii ugu dambeysay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kulamo kala duwan kula yeelanaayay madax caalami ah.
Illaa iyo haatan lama oga in madaxweyne Farmaajo uu dib ka dalban doonno ciidanka AMISOM iyo inkale, inkastoo laga yaabo inay tiro yar oo ka tirsan AMISOM ay kusoo biiraan ciidanka DANAB.